Warmurtiyeedka Shirka Madasha Wasiirada Maaliyadda – WASAARADDA MAALIYADDA
Garowe, September 27, 2017 :- Shirka madasha Wasiirada Maaliyadda oo ay qaban-qaabisay Wasaaradda Maaliyadda DFS, ayaa lagu qabtay magaalada Garowe 24ka ilaa iyo 28ka Bisha September, si ay wada hadalo uga yeeshaan xoojinta xiriirka Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada dalka; isla markaasna u ansixiyaan talooyin ay soo gudbiyeen guddiga farsamo ee xiriirka dowladaha.
Shirkaan waxaa shir guddoominaayay Wasiirka Maaliyadda DFS Mudane, Cabduraxmaan Ducaale Beyle iyadoo ay ka soo qayb-galeen Wasiirka Maaliydda Puntaland, Wasiirka Maaliyadda Jubbaland, Wasiirka Maaliyadda Koonfur Galbeed, Wasiir u xigeenka Maaliyadda Galmudug.
Madasha Wasiiradu waxay isla meel dhigeen arrimahaan hoos ku xusan:
Waxay xoojisay, ayidana shirkii ugu horeeyay ee Wasiirada Maaliyadda ay yeesheen November 3 2015, kaas oo lagu yegleelay madasha Wasiirada Maaliyadda iyagoo waliba ku baaqay in laga wada shaqeeyo xoojinta xiriirka dowladda dhexe iyo Dowlad Goboleedyada iyo sidoo kale sare u qaadidda hufnaanta Maamulka iyo Maaliyadda ee Dalka;
Waxay isku dhiiro-galiyeen in la helo lagana wada-shaqeeyo wadiiqo isku furnaan ganacsi;
Waxay isla garteen in midaynta canshuuraha dalka uu dhiiro galin xoogan u yahay cirib-tirika caqabadaha kala xirnaanta kala ganacsiga Maamul Goboleedyada;
Waxay hoosta ka xariiqeen baahida loo qabo in la xoojiyo maamul wanaagga iyo xaqiijinta sare u qaadidda hufnaanta Maamulka iyo Maaliyadda ee Dalka;
Waxay ansaxiyeen talooyinkii ay soo gudbiyeen guddiga farsamo ee xiriirka gobollada ee ku aadanaa midaynta canshuuraha badeecadaha oo ay ka mid yihiin Jaadka, Sigaarka iyo canshuuraha Socdaalka/Dhoofka;
Waxay isla garteen in la xoojiyo talo wadaaga ku saabsan caawimaadda dibadda ka timaada si looga wada faa’idaysto;
Waxay ku baaqeen sii wadidda, xoojinta iyo ka wada xaajoodka toosinta xiriirka dowladda dhexe iyo kan Dowlad Goboleeyada;
Madashu waxay isku raacday in mustaqbalka dhow laga wada hadlo midaynta hanaanka furdooyinka;
Madashu waxay go’aamisay in shirka madasha ee soo socda la qaban doono dabayaaqada bisha December 2017.